Autodesk 3ds Max, programa tsara indrindra amin'ny famoronana sary | Famoronana an-tserasera
Autodesk 3ds Max, fantatra koa amin'ny hoe 3D Studio Max dia iray amin'ireo programa Sary 3D sy famoronana sary mihetsika malaza sy ampiasaina amin'ny rafitra fiasa Windows. Ny fahaizany manitsy matanjaka sy matanjaka, maritrano plugin lehibe sy manerana izao tontolo izao, ary fomban-drazana lava eo amin'ny sehatra Windows ataovy ity programa ity ho iray amin'ireo be mpampiasa indrindra amin'ny mpamorona lalao video sy mpamorona sary mihetsika ho an'ny sarimihetsika, fahitalavitra ary dokam-barotra.
Ny fampiasana an'ity programa ity dia miely koa ao amin'ny fandalinana maritrano ary ireo manam-pahaizana manokana amin'ny effets spécial ary dia anaram-boninahitra malaza eran'izao tontolo izao lalao video toa an'i Tom Raider sy Splincenter Namboarina sy namboarina tanteraka tamin'ny 3D Max izy ireo ary iray amin'ireo ankafizin'ny orinasa Ubisoft ny famoronana ny lohateny ho an'ny fahaizany fanta-daza.
Inona no atao hoe 3D Max?
3D Max dia rindrambaiko manokana ho an'ny maodely 3D, sary mihetsika, famoronana ary fandikana ary ireo no izy programa matanjaka manolotra mpamorona Animation 3D, modely, famoronana ary fandikana fitaovana XNUMXD namboarina fampitomboana haingana ny famokarana ataon'ny mpamorona sy ny mpanakanto ary ny fizarana rehetra amin'ireto programa ireto dia mizara teknolojia sy fotodrafitrasa fototra, fa ny kinova isan-karazany dia natao ho an'ny karazana mpampiasa samihafa.
Misy ny fitaovana manokana ho an'ireo mpamorona lalao video, mpamorona sary sy manam-pahaizana manokana momba ny fahitana; raha ny kinova hafa kosa dia mikendry ireo mpanao mari-trano, mpamorona ary injeniera ary misy endri-javatra miavaka ho an'ireo vondrona ireo. Saingy amin'ny ankapobeny dia misy ny dikanteny rehetra famolavolana mahery vaika, sary mihetsika ary fitaovana fandikana izany dia hitondra ny zavatra noforonintsika ho amin'ny sehatra hafa.
Ny iray amin'ireo olana mahazatra indrindra amin'ity karazana programa ity dia ny fotoana sy loharano ampiasain'ny renderingn, ny olana izay, na dia tsy voavaha aza, dia nohafohezina tao amin'ireo kinova farany amin'ity programa malaza ity izay nohatsaraina tamin'ny alàlan'ny sary vaovao mihombo haingana izay nampitombo be ny fampisehoana sy ny kalitaon'ny fahitana eo am-baravarankely sary. manolotra valiny tena izy, azo vinavinaina kokoa nefa tsy mila miahiahy be loatra momba ireo masontsivana fandikana; ny fihetsiketsehan'ny vatana henjana vaovao izay manome antsika safidy hamorona simika dinamika amin'ny vatana mivantana eo am-baravarankely, miaraka amin'ireo fanatsarana maro hafa.
Ity dia iray amin'ireo programa izay te ho tonga mpanao sary mpanamboatra sary Tokony hanandrana farafaharatsiny izy ireo alohan'ny hanapahan-kevitra ny tsy hanokana ny tenany amin'ny sary mihetsika 3D, satria manome toky anao aho fa aorian'ny fanandramana izay vitantsika amin'ny volavolan-tsaintsika sy ireo fitaovana mety dia tsy afaka mandà ny hanaraka izany lalana famoronana izany isika ary maninona no tsy lazao izany, ahazoam-bola be ary miaraka amin'ny ho avy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Autodesk 3ds Max iray amin'ireo rindrambaiko famoronana sary tsara indrindra
Salama Jorge, tatitra tena tsara. Na dia tsy mampihemotra ny mety ananan'io rindrambaiko io aza aho (5 taona lasa teo ho eo no nampiasako azy), mahaliana ihany koa ny maneho hevitra momba ny vidiny, avo dia avo. Angamba Blender safidy malalaka, izay manolotra tombony be koa, tokony hojerena. arahaba !!!!